Shiinaha & Itoobiya oo hakiyey isticmaalka dayuuradaha Boeing 737 MAX + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Shiinaha & Itoobiya oo hakiyey isticmaalka dayuuradaha Boeing 737 MAX + Sawirro
Shiinaha & Itoobiya oo hakiyey isticmaalka dayuuradaha Boeing 737 MAX + Sawirro
(Hadalsame) 11 Maarso 2019 – Shirkado badan oo duullimaadyada ka shaqeeya ayaa lagu wadaa inay hakiyaan adeegsiga dayuuradda ay farsamayso sharikadda Maraykanka ah ee Boeing, gaar ahaan dufcadda 737 MAX 8 kaddib markii uu isa soo taray walaaca la xiriira amaankeeda.
Jeer ay socdaan baaritaanno ku aaddan wixii ridey dayuuraddii shalay ku dhacday dalka Itoobiya ayuu Shiinuhu amar ku bixiyay in hawada laga saaro nooca Boeing 737 MAX 8 marka ay saacadda maxalliga ihi tahay 6 p.m, taasoo ay u aaneeyeen wax ay ku sheegeen mabda’ooda “oo aan wax dulqaad ah u lahayn halisaha dhanka badbaadada.”
Shiinaha ayaa ah dalka adeegsada raxanta ugu badan ee dayuuradaha Boeing 737 MAX 8, isagoo ku howlgala ilaa 97 dayuuradood oo noocaas ah, sida ay sheegayaan saxaafadda Shiinuhu.
Waxaa raadka Shiinaha raacday Ethiopian Airlines oo ah shirkadda uu dhibkii ugu dambeeyay qabsaday, oo iyana ku dhawaaqday inay si KMG ah u hakinayso ku shaqaynta dayuuradaha Boeing 737 MAX 8 taasoo ah tillaabo loo qaaday “taxaddar amaan ahaan” kaddib shilkii ay shalay ku dhinteen 157 qof.
Sharikadda Ethiopian Airlines Group ayaa waxaa haatan u harsan oo ah nooca 737 MAX oo ka mid ah raxanteeda duullimaad, iyadoo ay 25 kale oo noocaa ihi uga dalbanaayeen Boeing.
Yeelkeede, haatan waa la joojiyay adeegsiga dayuuraddaasi, ilaa amar dambe, kaddib shilkii duullimaadkii 302 oo shalay dhacay daqiiqado uun kaddib markii ay kacday, taasoo ay ku dhinteen dhamaan dadkii saarnaa oo dhan.
Previous articleCiidamada Amniga oo Muqdisho ku xiray nin ku labisnaa dharka dumarka oo is qarinayay
Next articleCAJIIB: Duqa Magaalada Fair Haven ee dalka Maraykanka oo loo doortay Neef Ari ah + Sawirro